Ned Norton – Sama-falaha Jir-dhiska u sameeya dadka Naafada ah. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Ned Norton – Sama-falaha Jir-dhiska u sameeya dadka Naafada ah.
Posted by: radio himilo May 8, 2017
Muqdisho – Ned Norton wuxuu u shaqeynayay sida tababare jireed oo katirsan tartamada Olombikada markii nin da’yar oo ka jaban laf dhabarta sare ee luqunta uu u yimid – isaga oo weydiistay kaalmo.
“Ugu horreyn, ma aqoon wixii aan ka yeeli lahaa,” ayuu yiri Norton kaas oo ah maareeyaha naadi caafimaad oo ka dhisan Albany, New York.
Si wadajir ah, labaduba waxay horumariyeen barnaamij hir-galay – da’yarkiina wuxuu sameeyey bogsimaad lagu guuleystay.
Next: Marka ay Derisku is dulmiyaan!